आधा सांसद घटाऔं, बचेको पैसाले सिमानामा पर्खाल लगाऔं– सहमत भए सेयर गरौ ! – MeroAkhabar
आधा सांसद घटाऔं, बचेको पैसाले सिमानामा पर्खाल लगाऔं– सहमत भए सेयर गरौ !
in Corona Virus, उपकरणहरु, एप्पल, गुगल, जीवनशैली, परिवार, फोटोग्राफी, राष्ट्रिय, विचार, विश्व, समाचार
काठमाडौं। मुलुक ‘लकडा’उन’मा छ । विश्व कोरोना मा’हामा’रीले त्रसित छ । आर्थिकमन्दीले नेपाल मात्रै होइन विश्वका ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु पनि त्रा’हि’त्रा’ही भएका छन् । अब आउने अवस्थाको कसरी सामना गर्ने र विश्वको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आ–आफ्नो ठाउँबाट व्यापक बहस भइरहेको छ । नेपालजस्तो अ’विकसित र परम्परागत कृषि प्रधान देश त झनै सं’कटमा फ’स्ने निश्चित छ ।
तर, यही सं’कटकाबीच नेपालमा अर्को सं’कट(राष्ट्रियतामा सं’कट)परेको छ । अहिले भारतले पश्चिम नेपालको भूभाग मिचेपछि सतहमा आएको राष्ट्रियताको बहसले सिमानामा पर्खाल लगाउनु पर्ने अभिमतलाई थप बल पुगेको छ । तर,सिमानामा पर्खाल लगाउँदा कति बजेट लाग्ला, त्यो सम्भव छ कि छैन । छ भने तारबार लगाउने बजेट कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
सर्वप्रथमतः- तारबार लगाउने कुरा गरिरहँदा यो सम्भव छ कि छैन भन्ने विषय कोट्याउनु उपर्युक्त हुन्छ । सिमानामा तारबार लगाउने कुरा अहिलेदेखि मात्रै उठेको होइन । लामो समयदेखि उठेको यो विषय अहिले अलिक बढी चर्चामा आएको मात्रै हो ।सिमानामा तारबार या पर्खाल लगाउनु अगाडि पहिलो कदमको रुपमा सिमानाको टुंगो लगाउनु आवश्यक छ । दोस्रो कदम तारबार लगाउने या पर्खाल लगाउने भन्ने विषयमा भारतसँग सहमति गर्नु आवश्यक छ ।